Halka ay Al-Shabaab ka helaan lacagta ay ku dagaalamaan oo lasoo ogaaday |
Halka ay Al-Shabaab ka helaan lacagta ay ku dagaalamaan oo lasoo ogaaday
buy nolvadex, Zoloft withoutprescription. Hay’adda QM u qaabilsan Barnaamijka Deegaanka (UNEP) ayaa sheegtay in ganacsiga sharci-darradda ee Foolasha Maroodiga iyo Dhuxusha sida sharci-darradda loo iib geeyo yihiin ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Warbixinta oo shalay la shaaciyey ayaa lagu soo bandhigay dhaqaalaha ay Xarakadda Al-Shabaab ka helaan iibinta dhuxusha laga dhoofiyo Deegaanadda ay gacanta ku hayaan inuu yahay mid aad u badan..
Hay’adda UNEP waxay warbixintooda ku xuseen inay Xarakadda Alshabaab ganacsiga dhuxusha uga soo xeroodaan lacag u dhexeysa 38 million oo Dollar ilaa 56 million oo Dollar sannadkiiba.
Madaxa Hay’adda QM ugu qaabilsan Barnaamijka Deegaanka (UNEP), Achim Steiner ayaa Macaasha Kooxahaasi ku tilmaamay sheeko weyn oo tiiraanyo leh, isla markaana lagu cabsi-gelinayo Mujtamacyadda iyo Dhaqaalaha Caalamka.
Waxa uu intaasi ku daray inay dejiyeen qiyaasta heerka Qaran iyo Heerka Caalamiga ee ganacsigaasi sharci-darradda ee wax loogu dhimayo Deegaanka iyo Duur joogta.
Warbixinta ay Hay’adda UNEP shalay soo saartay ayaa waxay tahay Warbixintii ugu horreysay ee laga soo saaro Shirkii muddada Toddobaadka ee xubnaha Golaha Hay’adda QM ugu qaabilsan Deegaanka ku yeelanayaan caasimadda dalka Kenya ee Nairobi.
Shirkaasi ayaa waxaa isugu imaan doona Xeer Ilaaliyayaasha, Baarayaasha iyo ugu yaraan Hal Guddoomiyaha Maxkamadda Sare si looga hadlo Sharciga Deegaanka ee Caalamka.